Malunga nathi - Hebei Hongbang Ivaluva Co., Ltd.
MALUNGA ne-HEBEI HONGBANG VALVE CO., LTD (OKULUNGILEYO KWEVALVE)
Lawula ulwelo kwaye wenze ubuqaqawuli
U-Hebei Hongbang ukubonelela ngezisombululo zobuchule zolawulo lwevalve
Kutheni ukhetha u-Hebei Hongbang
I-Hebei Hongbang Valves Co., Ltd. yasekwa ngo-1997. Inikela ukuseta uphawu oludumileyo. Ukutyhubela iminyaka yokusebenza nzima, u-Hebei Hongbang uqokelele uyilo lwevalve yokulawula, ukwenza kunye nokuziqhelanisa namava kunye nokwenza uthotho lweevalve zethu zolawulo. Ngoncedo olomeleleyo lokuthweswa isidanga kwisikolo samaTshayina senzululwazi, sinomgangatho ophezulu wokuyila kunye neqela elivelisayo, igumbi loyilo le-CAD, izixhobo zovavanyo lwentsebenzo yesixhobo esichanekileyo somatshini wolawulo lwedijithali kunye nevalve yolawulo (umgaqo wevalve) kunye nokusebenza ngokukuko ithiyori yolawulo. Zonke iintlobo zezivalo zethu ziyahlangabezana nazo zonke iimeko kunye neemfuno. Inkxaso yetekhnoloji elungileyo kunye nokugqibezela emva kwenkqubo yokuthengisa iinkonzo zisizisela igama elihle. Khetha u-Hebei Hongbang kuthetha ukuba ukhetha ukhuseleko, ukusebenza ngokukuko kunye nokuchaneka okuphezulu. Zonke iintlobo zezivalo zethu zisetyenziswe kakhulu kumacandelo epetroleum, isinyithi, ishishini elikhanyayo, ukutya, ukhuselo lwendalo, amandla ombane, ubushushu, ubonelelo lwamanzi kunye nokuphumelela igama kwimakethi yamanye amazwe.
Ivenkile yokuThengisaPhezulu kwephepha
Ukusebenza ngokuchanekileyo kwezixhobo, iindlela zokuhlola eziphambili kunye nenkqubo yolawulo olungqongqo zenza iimveliso zaseHongbang njengeemveliso ezintle. Sineseti epheleleyo yenkqubo yetekhnoloji yokuvelisa ngexesha lokulungiswa kwezahlulo, ukuhlangana, ukulungisa ingxaki, ukuhlolwa kunye nokuvavanywa kunye nokuthintela iimveliso ezingafanelekanga.
Ivenkile yethu yokusebenza kunye neemveliso
I-Hebei Hongbang Valve Co, Ltd luphando, uphuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo njengenye yeshishini elikhulu levalve. Inkampani ibekwe kwiPhondo le-Hebei NINGJIN haozhuang zone mveliso. Inkampani ihlala kwi-20,000 yeemitha zesikwere, ikomkhulu elibhalisiweyo le- $ 6,500,000, setha i-casting, machining, unyango lomphezulu weshishini levalve. Inkampani ivelisa iivelufa zamabhabhathane, iivalve zokujonga, iivalves zamasango, iifilitha kunye neevaluva ezingekho mgangathweni, ezisetyenziswa kakhulu kumbane wombane, imichiza, ipetroleum, isinyithi, ukucokisa ioyile, amayeza, ioyile kunye nemibhobho yegesi, edolophini nakwamanye amashishini.
`` WAFER BUTTERFLY VALVE '', '' LUG BUTTERFLY VALVE '', '' UTSHINTSHO LWENTSIMBI OLUQHELEKILEYO '', '' UPVC BUTTERFLY valve '', '' ISANGQA SEVALU '', '' IPleyiti EBINI YOKUJONGA IVEKI '', '' INDLELA ENYE YOKUJONGA IVEKI '', '' Yerabha INDIMA ''